मोदीलाई पत्र लेख्दै केसीको अनशन स्थगित [भिडियो] - तस्विर/भिडियो - नेपाल
मोदीलाई पत्र लेख्दै केसीको अनशन स्थगित [भिडियो]
गोविन्द केसी । तस्बिरः इकान्तिपुर
प्रा.डा. गोविन्द केसीले नवौँ दिनमा अनशन स्थगित गरेका छन् । डडेलधुरामा १७ औँ अनशन बसिरहेका उनले भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै अनशन स्थगित गरेका हुन्। हेर्नुस् उनको विगतका अनशनको पृष्ठभूमि र उपलब्धि भिडियोमा ।
प्रकाशित: कार्तिक २६, २०७६
ट्याग: डा. गोविन्द केसी
१३ औँ साग सम्झाइरहने १३ तस्बिर
२० तस्बिरमा हेर्नुस् गढीमाईका रङहरू
[फोटो कथा] गढीमाई मेलामा पशुबलिको विरोध हुँदै छ, दर्शनार्थी भने झन् थपिँदै छन्